Global Voices teny Malagasy » Nanolotra Vola 2 Tapitrisa Dolara Hampitomboana Ny Fandraisana Anjara Amin’ny Habaka Ara-tsosialy Shiliana ny Gates Foundation · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Septambra 2017 1:56 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Miranah
Tamin'ny volana Martsa teo, nanondro  ny tranonkalan'ny Contenidos Locales (“Vaovao ao An-toerana”) , fandaharan'asan'ny Tambajotran'ny Tranombokim-pirenena ao Shily , ho ohatra faka tahaka iray momba ny andrim-panjakana tahaka ny tranomboky afaka manentana ny fandraisan'anjaran'olom-pirenena amin'ny fampiofanana ireo mpanjifany ao an-toerana mba hanararaotra ireo fitaovana media vaovao aho.
Anisan'ireo ohatra ny Buscando Mis Raices  (“Mitady ny Fiaviako”) avy amin'i Rosa Tromilén, izay manolotra tantara manokana momba ny vondrom-piarahamonina betsaka Mapuche, Juan Calfumán; Conjunto Folklórico Renacer de Cucao , vondrona tanora ao amin'ny Nosy Chiloé  natokana hiarovana ny vakisaova nentin-drazana ao an-toerana; ary ny tranonkalan'ny Fikambanana Artistas Plásticos de Puerto Montt  (“Fikambanan'ny Mpanakanto ara-Plastika ao Puerto Montt”).
Nandritra ny fivoriana isan-taona fanaon'ireo mpitantana tranomboky Shiliana, nampanantena tamin'ireo nivory i Enzo Abbagliati  fa amin'ny faran'ny taona 2009, homena fidirana aterineto an'onjam-pifandraisana maimaim-poana ny tranokala Shiliana rehetra, manomboka ao amin'ny tanjona atsimo any Patagonia ka hatrany amin'ny sisintany avaratra mifanolotra amin'i Bolivia. Nanantitrantitra ihany koa izy fa ny fampiofanana momba ny fahaizana nomerika sy ny tranokalan'ny “Votoaty ao an-toerana” dia havaozina mba hanehoana ny toetram-pifandraisana mifandraika amin'ny tranonkala maoderina.
Tamin'ny fivoriana tamin'ity taona ity, nahazo fanambarana mahafinaritra ireo mpitantana tranomboky Shiliana izay azo antoka fa hahatonga ny fampanantenan'i Enzo ho tanteraka. Araka ny vakin'ny fanambarana an-gazety  hoe, “noho ny fanomezana fahatelo avy amin'ny Orina Mpanasoa Bill & Melinda Gates, hiatrika ny fanamby amin'ny fitomboan'ny fandraisana anjara sosialy amin'ny web 2.0 ny BiblioRedes.”
Tao amin'ny bilaoginy manokana, nanazava bebe kokoa momba ny fandaharan'asa  i Enzo Abbagliati
Ahoana no fomba hampiasantsika ireo fitaovana avy amin'ny Orina Mpanasoa Gates? Voalohany, mila mampitombo ny “anjara tosaka” misy ao amin'ny tranomboky (hatramin'ny 1MB) isika. Mba hampiroboroboana ny fidirana amin'ny fiarahamonina ao amin'ny aterineto, tsy maintsy manana ny anjara tosaka (bande passante) ianao .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/12/105590/
 Contenidos Locales (“Vaovao ao An-toerana”): http://www.contenidoslocales.cl/
 Tambajotran'ny Tranombokim-pirenena ao Shily: http://www.biblioredes.cl/bibliored/
 fanambarana an-gazety: http://www.biblioredes.cl/BiblioRed/notas/not221.htm
 nanazava bebe kokoa momba ny fandaharan'asa: http://abbagliati.blogspot.com/2009/01/un-nuevo-logro-de-biblioredes.html
 tsy maintsy manana ny anjara tosaka (bande passante) ianao: http://abbagliati.blogspot.com/2007/10/ser-20-en-el-mundo-10-o-el-desafo-de.html